Homepage - Isi - Ụlọ akwụkwọ asụsụ BLI na Canada
English & French na Canada
Ebe abụọ mara mma
Montreal bụ obodo pụrụ iche. Obodo ebe asụsụ na ọdịbendị na-ezukọ. Obodo nke nwere uto Europe nke ga-arafu gi site na mbu.
Ọ bụ obodo a na-asụ asụsụ abụọ n'asụsụetiti St. Lawrence. Ọ bụ ebe zuru oke ịmụta asụsụ Bekee na French ma jigide onwe gị na njem nlegharị anya.
N'agbanyeghi mgbe ị na-ahọrọ ịbịa, ọ dị ihe ọ bụla na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ịme. Ma n'oge okpomọkụ, oge opupu ihe ubi, ụbịa ma ọ bụ oyi, enwere ihe ọ bụla na-aga n'ihu.
Quebec bụ obodo dị ịtụnanya ma mara mma. Ọ bụ obi omenala French na North America. Otu mpempe Europe na mpaghara ọhụrụ. Ebube n'osimiri St. Lawrence River, Quebec bụ otu n'ime obodo kachasị mma n'ụwa na isi obodo Quebec.
Ọ bara ọgaranya n'akụkọ ihe mere eme, ime ụlọ na ọdịnala nke nwere ezi ọchịchọ Europe.
Dị ka obodo Canada kachasị ukwuu bụ 100% francophone, Quebec bụ ebe kachasị mma iji jupụta na asụsụ gị ma n'otu oge ahụ nwee mmasị na obodo a mara mma maka gị !!
Ihe omume dịgasị iche iche
BLI na-enye usoro dịgasị iche iche iji gboo mkpa gị. Na BLI ị ga-ahụ ihe omume ị na-achọ.
Nhọrọ Nhọrọ dịgasị iche
Ụlọ ọrụ anyị na-enye dị iche iche nhọrọ maka ịhọrọ.
Mmemme Ọhụụ Na-atụ Anya
Na-ebi ndụ n'asụsụ ị na-amụta site na itinye aka na mmemme mmekọrịta anyị na-enye nnukwu ọrụ kwa ụbọchị.
Ndụmọdụ onwe onye
Anyị na-ejide n'aka na ị ga-enweta nkwado niile ị chọrọ ka ị na-ebi ahụmahụ mmụta a.
Visa & Enyemaka Enyemaka
Ọ bụrụ na ịchọrọ visa esenowo ma ọ bụ nyocha akwụkwọ iji bịa Canada, anyị nwere ike inyere gị aka na usoro ahụ.
Anyị nwere ike ilekọta mkpuchi ahụike gị, bụ nke dị mkpa maka ụmụ akwụkwọ niile na-abịa Canada.
Anyị na-eburu gị ma tụfuo gị na ọdụ ụgbọ elu iji mee ka njem njem gị na Canada dị mfe ma dị jụụ dịka o kwere mee.
Otu n'ime ahụmahụ kasị mma m nwetụla. Enwere m ezigbo ntụrụndụ na Montreal na amaghịdị m na m ga-amalite. Ihe oriri, ndị mmadụ, ebe, ihe ị nwere ike ime, ihe ị na-amụta, kwa ụbọchị ị na-amụta obere akụkọ ihe mere eme nke Montreal na ụzọ dị mma
Ana m akwado 100% ma m ga-abịaghachi n'echeghị ya echiche ugboro abụọ
Mgbe m rutere Canada, amaghị m Bekee ma ọ bụ French. Mgbe m nwesịrị ihe omume Bilingual BLI, nkà asụsụ m n'asụsụ abụọ ka mma. Taa, enwere m ike ịsị na m na-akparị
Ọmụmụ Akwụkwọ Bilingual - Brazil
M debara aha na BLI iji mụọ Bekee ma ghọọ onye mmụta dị elu karịa obere ọnwa 6. Ndị nkụzi bụ ọkachamara na ha na-ahụ na ị ghọta ma mụta ihe niile ha na-akụziri gị. Klas bụ ezigbo mmekọrịta. Ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa nile ka m nwee ike ịme ọtụtụ ndị enyi.
Onye Mmụta Bekee - Korean